UZO ESI EME KA OTUTU DISK DI NA VIRTUALBOX - VIRTUALBOX - 2019
Maka mma nke ịrụ ọrụ na nnukwu tebụl data na tebụl, ha ga-enye iwu mgbe niile dị ka otu nchịkọta. Tụkwasị na nke ahụ, maka ebumnuche ụfọdụ, mgbe ụfọdụ, ọ bụghị mkpa ka usoro nchịkọta data niile dị, kama ọ bụ naanị otu onye. Ya mere, iji ghara inwe mgbagwoju anya na nnukwu ozi, ihe ngwọta ga-abụ ịkọba data na nyo site na nsonaazụ ndị ọzọ. Ka anyị chọpụta otu esi edepụta na nyo data na Microsoft Excel.
Nhazi data dị mfe
Ntugharị bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mfe mgbe ị na-arụ ọrụ na Microsoft Excel. Na ya, ị nwere ike ịhazi ahịrịokwu nke tebụl n'usoro ederede, dị ka data dị na sel nke ogidi ahụ.
Enwere ike ịmepụta data dị na Microsoft Excel site na iji bọtịnụ "Tọọ na nza", nke dị na "Home" taabụ na rịịbịị na "Ewuzi" ngwaọrụ. Mana nke mbụ, anyị kwesịrị pịa mkpụrụ ndụ ọ bụla na kọlụm anyị na-aga ịhazi.
Dịka ọmụmaatụ, na tebụl n'okpuru, a ga-ahazi ndị ọrụ ọnụ. Anyị na-abanye na sel ọbụla nke "Aha", wee pịa bọtịnụ "Tọọ na nza". Iji chịkọta aha aha, site na ndepụta nke gosipụtara, họrọ ihe "Tọọ si A ruo Z".
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ihe niile data dị na tebụl dị, dịka ndepụta nke aha.
Iji mee ụdị nhazi na mpaghara azu, n'otu menu ahụ, họrọ Ụdị bọtịnụ site na Z ruo A ".
A na-ewughachi listi ahụ na ntụgharị usoro.
Ekwesiri ighota na ihe nhazi nke a bu nani ihe ederede ederede. Dịka ọmụmaatụ, mgbe a na-akọwapụta usoro ọgụgụ, ụdị "Site na nke kacha nta ruo kachasị" (na ntụgharị ihu) ka akọwapụtara, na mgbe usoro nkọwa ụbọchị ahụ kpọmkwem, "Site n'oge ruo n'oge" (na ntụgharị ihu).
Ma, dịka anyị na-ahụ, na ụdị ụdị aha ahụ dị iche iche site na otu ihe ahụ, data nke nwere aha otu onye ahụ bụ ndokwa n'usoro iwu na-akwadoghị n'ime.
Na ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta aha ndị ahụ, kama dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na aha ahụ jikọrọ ya, mee data ndokwa site na ụbọchị? Iji mee nke a, yana iji ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ, niile na otu menu "Tọọ na nza", anyị kwesịrị ịga na ihe "Nhazi ụdị ...".
Mgbe nke ahụ gasịrị, window windo nhazi ahụ meghere. Ọ bụrụ na enwere isi na tebụl gị, biko mara na na windo a ga-enwe akara akara na-esote "Usoro data m nwere isi ihe".
Na mpaghara "Kọlụm" ezipụta aha nke kọlụm, nke a ga-ahazi. N'okwu anyị, nke a bụ "Aha" aha. N'ọhịa "Nhazi" ọ na-egosipụta site na ụdị ụdị ọdịnaya ga-agbakọ. Enwere nhọrọ anọ:
Ma, n'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eji "Ụkpụrụ" eme ihe. Enwere ya na ndabara. N'ọnọdụ anyị, anyị ga-ejikwa ihe a.
Na kọlụm "Order" anyị ga-ezipụta usoro nke data ga - adị: "Site na A ruo Z" ma ọ bụ na ntụgharị. Họrọ uru "Site na A ruo Z".
Ya mere, anyị na-edozi ụdị nke otu n'ime ogidi ahụ. Iji hazie sorting na kọlụm ọzọ, pịa bọtịnụ "Tinye ọkwa".
Usoro ọzọ nke ubi gosipụtara, nke a ga-ejupụta ugbu a maka nhazi site na kọlụm ọzọ. N'ọnọdụ anyị, site na kọlụm "Ụbọchị". Ebe ọ bụ na etinyere usoro usoro a n'ime mkpụrụ ndụ ndị a, na "Order" ubi anyị na-esetịpụ ụkpụrụ ahụ abụghị "Site na A ruo Z", mana "Site n'oge ruo n'oge", ma ọ bụ "Site na nke ọhụrụ ruo n'oge ochie."
N'otu ụzọ ahụ, na windo a, ị nwere ike ịhazi, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na nhazi site na kọlụm ndị ọzọ iji mee ihe dị mkpa. Mgbe niile mebiri, pịa bọtịnụ "OK".
Dịka ị pụrụ ịhụ, ugbu a na tebụl anyị, data niile na-ahazi, nke mbụ, site na ọrụ onye ọrụ, mgbe ahụ, site na ụbọchị ịkwụ ụgwọ.
Ma, nke a abụghị atụmatụ nile nke nhazi nhazi. Ọ bụrụ na ịchọrọ, na windo a, ị nwere ike ịhazi nhazi ahụ ọ bụghị site na kọlụm, kama site na ahịrị. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ "Ngalaba".
Na windo meghere nke nhazi nhazi, megharia ngbanwe site na onodu "Uzo ogugu" rue onodu "Ogidi oghere". Pịa bọtịnụ "OK".
Ugbu a, site n'iji ihe atụ dị na mbụ tụnyere, ị nwere ike tinye data maka nhazi. Tinye data, wee pịa bọtịnụ "OK" ahụ.
Dịka ị nwere ike ịhụ, mgbe nke a gasịrị, a na-atụgharị ogidi ndị ahụ dịka ọnụọgụ nke edepụtara.
N'ezie, maka tebụl anyị, were dịka ọmụmaatụ, iji nhazi ma gbanwee ọnọdụ nke ogidi ndị ahụ adịghị aba uru karịsịa, mana maka tebụl ndị ọzọ ụdị ụdị a nwere ike bụrụ ihe kwesịrị ekwesị.
Na mgbakwunye, na Microsoft Excel, ọrụ ọrụ ntanetị dị. Ọ na-enye gị ohere ịhapụ naanị anya data ịchọrọ, ma zoo ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịchọta data zoro ezo na ọnọdụ a na-ahụ anya.
Iji jiri ọrụ a, anyị pịa mkpụrụ ndụ ọ bụla na tebụl (ma ọkacha mma na nkụnye eji isi mee), pịazie bọtịnụ "Tọọ na nyocha" na "Nhazi" ngwaọrụ. Ma, oge a na menu na-egosi, họrọ ihe "Nyocha". Ị nwekwara ike kama nke a omume nanị pịa igodo Nchikota Ctrl + ịgbanwe + L.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'ime mkpụrụ ndụ ndị nwere aha nke ogidi nile, akara ngosi pụtara n'ụdị akụkụ, nke edere ya na atọ triangle.
Pịa na akara ngosi a na kọlụm dịka anyị ga-esi nyocha. N'ọnọdụ anyị, anyị kpebiri iji aha gụọ anyị. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị anyị mkpa ịhapụ data naanị ọrụ Nikolaev. Ya mere, anyị na-ewepu akọrọ site na aha ndị ọrụ ndị ọzọ niile.
Mgbe usoro ahụ mechara, pịa bọtịnụ "OK".
Dị ka anyị na-ahụ, na tebụl, e nwere nanị akara na aha onye ọrụ nke Nikolaev.
Ka anyị mechie ọrụ ahụ, ma tinye na tebụl naanị data metụtara Nikolaev maka nkeji atọ nke 2016. Iji mee nke a, pịa akara ngosi na cell "Ụbọchị". Na ndepụta nke mepere emepe, wepụ ihe akọrọ site na ọnwa "May", "June" na "Oketopa", ebe ọ bụ na ha anaghị emetụta nkeji iri atọ, wee pịa bọtịnụ "OK".
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere data naanị anyị chọrọ.
Iji wepu ncha na kọlụm ụfọdụ, na igosi data zoro ezo, pịazie akara ngosi dị na cell ahụ na aha nke kọlụm a. Na menu na-emepe, pịa ihe "Wepụ nyo si ...".
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtọgharịa nhazi dị ka tebụl dị ka tebụl si dị, ịkwesịrị ịpị bọtịnụ "Tọọ na nyocha", wee họrọ "Kọwaa".
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ nzachaa kpamkpam, mgbe ahụ, dị ka mgbe ọ malitere, n'otu menu ahụ, họrọ "Ihe nzacha", ma ọ bụ pịnye igodo dị na keyboard Ctrl + Shift + L.
Na mgbakwunye, a ga-ahụta na mgbe anyị gbanyesịrị ọrụ "Nchọta", mgbe ị pịrị akara akara aka na mkpụrụedemede nkụzi okpokoro, na nchịkọta nhọrọ, ọrụ nhazi ahụ dị, nke anyị kwuru n'elu: "Tụgharịa A ruo Z" , "Pụta site na Z ruo A", na "Tọọ site na agba".
Nkuzi: Otu esi eji ntinye aka na Microsoft Excel
Ntughari na nzacha nwekwara ike megharia site na ichogharia ebe i na - arusi n'ime ihe a na - akpo "okpokoro isi".
E nwere ụzọ abụọ ịmepụta tebụl dị mma. Iji jiri nke mbụ n'ime ha, họrọ mpaghara dum nke tebụl ahụ, na, na-abanye na Ụlọ taabụ, pịa bọtịnụ na Usoro dị ka teepu Teepu. Mpịpị a dị na toolbar Styles.
Na-esote, họrọ otu n'ime ụzọ ndị kachasị amasị gị na ndepụta nke ga-emepe. Nhọrọ nke okpokoro agaghị emetụta ọrụ nke okpokoro.
Mgbe nke ahụ gasịrị, igbe na-emepe mepeepe ị nwere ike ịgbanwe nhazi nke tebụl. Ma, ọ bụrụ na ị họrọla mpaghara ahụ n'ụzọ ziri ezi, ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ ga-eme. Ihe kachasị mkpa bụ ịmata na e nwere akọrọ na-esote na "Ntọala na isiokwu". Ọzọ, dị nnọọ pịa bọtịnụ "OK".
Ọ bụrụ na ị kpebie iji usoro nke abụọ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahọrọ mpaghara dum nke tebụl ahụ, mana oge a gaa na "Tinye" taabụ. Mgbe ebe a, na rịbọn ahụ na tebụl "Tebụl", ị kwesịrị ịpị bọtịnụ "Isiokwu".
Mgbe nke ahụ gasịrị, dị ka oge ikpeazụ, windo ga-emeghe ebe ị nwere ike ịhazigharị nhazi nke ebe ntinye tebụl. Pịa bọtịnụ "OK".
N'agbanyeghị ụdị nke ị na-eji mgbe ị na-ekepụta tebụl dị mma, ị ga-ejedebe na tebụl, na mkpụrụ ndụ nke okpuru nke akara ngosi nchịkọta ndị a kọwara na mbụ.
Mgbe ị pịrị na akara ngosi a, ọrụ niile ahụ ga-adị dị ka mgbe ị na-amalite nchịkọta n'ụzọ dị n'usoro site na bọtịnụ "Tọọ na nyocha."
Ihe omumu: Otu esi meputa table na Microsoft Excel
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ngwá ọrụ nhazi na ntinye ihe, mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, nwere ike ịkwado ndị ọrụ na tebụl. Ihe kacha mkpa bụ ajụjụ ha ji mee ihe na ihe omume na tebụl nwere nnukwu usoro data.